Hockey Classic 16 Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » ဟော်ကီဂန္ထဝင် 16
ဟော်ကီဂန္ထဝင် 16 APK ကို
ခြောက်ဆယ်အသင်းများ, ခုနစ်အံ့သြဖွယ်ဂိမ်း Modes သာ, ONE All-ကြယ်ပွင့်ကစားသမား - ဟော်ကီဂန္ထဝင် 16 အတွက်ပေါ်တွင်သင်၏ဂိမ်းရ!
သငျသညျဟော်ကီနိုင်ငံများအသင်း, ပက်ထရစ်ကိန်းရဲ့ဟော်ကီဂန္ထဝင်နှင့်ပက်ထရစ်ကိန်းရဲ့ Arcade ဟော်ကီဆောင်ခဲ့သော developer များအနေဖြင့်, မိုဘိုင်းပေါ်နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အကြီးမြတ်ဆုံးဟော်ကီဂိမ်းခံစားရသည်။ ရေခဲရန်သင့်အမျိုးသားရေးအသင်းကို ယူ. ဆောင်းရာသီအားကစားပြိုင်ပွဲအတွက်ရွှေအနိုင်ရသို့မဟုတ်မျက်နှာ-OFF ၌သင်တို့၏အကြီးမားဆုံးမြို့ပြိုင်ဘက်ရင်ဆိုင်ရသားအပေါင်းတို့အနေဖြင့်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဂိမ်းနေ့ကလေထုနှင့်အရည်ထိန်းချုပ်မှုခံစား။
BIG GO OR အိမ်ပြန်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ဂိမ်းအသစ် mode ကိုဟော်ကီကုမ္ပဏီကြီးအတူ PLAYOFF ကနေချိုးယူပါ! အခုဆိုရင်သင်ဤကြီးမားသော bobble ခေါင်းနှစ်လုံးခခြှေဲနှင့်အတူအရူးသွားနိုင်ပါတယ်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အဘယ်သူမျှမနာရီကိုအဘယ်သူမျှမနှင့်အတူ5ကပျော်စရာဖြည့်အောင်ဂိမ်းကြာဂိုးသွင်းဖို့ပထမဦးဆုံးမြန်ဆန်ပွေးညီဟော်ကီကိုနှိပ်ပါ။
ခုနစျပါးအရေးယူ-ထုပ်ပိုးဂိမ်းသည် Modes နှင့်အတူကနေရှေးခယျြသငျ့ရဲ့ဟော်ကီအသင်းကောက်နှင့်ပြိုင်ဘက်ဆောင်းပါးတွဲတပ်များသည် PLAYOFF ခွက်ကိုတောင်းဆိုပါသို့မဟုတ်ပြင်ပဆောင်းပါးတွဲနှင့်အတူသစ်တစ်ခုအဆင့်အထိပြင်းထန်သောယှဉ်ပြိုင်မှုယူ။ အအေးအပြာမိုးကောင်းကင်အောက်, ခြောက်လအသင်းအဆောက်အဦးအပြင်စီးရီးချန်ပီယံလိဂ်သရဖူဆောင်းခံရဖို့ရေကန်များနှင့်အားကစားကွင်းပေါ်မှာထွက်တိုက်ဖျက်ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့သီးသန့်တိုက်ရိုက်ဂိမ်းများနှင့်အတူပြင်းစွာသောအရေခဲဟော်ကီပြိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ဗျာဒိတ်ကျမ်း။ သင်သည်သင်၏အသင်းအနိုင်ရရှိခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်တဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ, အချိန်ကန့်သတ်ဂိမ်းများအတွက်ကိတ်ကွင်းကိုနှိပ်ပါ။ သင့်ရဲ့အတိုက်အခံကိုဖွိုဖကျြပွီးသူတို့ရဲ့ပရိတ်သတ်တွေကဲ့ရဲ့, သို့မဟုတ် Facebook ပေါ်တွင်သင်၏ကြွားအခွင့်အရေးများမျှဝေပါ။
touch controls အတူဇုံ GET
အဆိုပါ puck ရိုက်ချက်များ, ခန္ဓာကိုယ်စစ်ဆေးမှုများနှင့် puck ရှင်းလင်းရေးတာမှတစ်ဦးချောမွေ့နှင့်စစ်မှန်ခံစားကယ်နှုတ်တော်မူကြောင်းဆန်းသစ်ထိထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူဖြစ်သွားသည်အဘယ်မှာရှိ Play ။ လူအပေါင်းတို့သည်ကြီးမားသော hits, ပန်းတိုင်နှင့်ပိုပြီးခံစား, screen ပေါ်မှာထိုးထွင်းသိမြင်ကိုပွတ်ဆွဲသုံးပြီးပြစ်မှုနှင့်ကာကွယ်ရေးအတွက်လွယ်ကူခြင်းနှင့်သင်၏အသင်းကိုထိန်းချုပ်!
တစ်ဦးကအစစ်အမှန် GAME နေ့ခံစား
ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ, သင့်ကစားပွဲကိုသင်ရတာဟာဂိမ်းရက်ကြာလေထုထဲတွင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဗတ္တိဇံအဖြစ်ဘဝရောက်ရလိမ့်မည်။ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်နယ်ပယ်တွင်ရိုင်းသွားနှင့်တစ်ဦးအစာရှောင်ခြင်းပွေးညီနှင့်စစ်မှန်ရေခဲဟော်ကီအတွေ့အကြုံကိုကယ်နှုတ်တော်မူသောအချောင် puck ပစ်ကပ်, ဂိုးသမားရူပါရုံကို & positioning ကိုအတူမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဂိမ်းကစားသဘောကျလူအစုအဝေး Watch ။
ဒါကြောင့်သင်ကအကြောင်း NHL, KHL သို့မဟုတ်ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော်ကီ့ပရိတ်သတ်တစ်ဦးပန်ကာင့်ဖြစ်စေ, ဤသူသည်သင်တို့အဘို့အဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
199.14 ကို MB